Tayada Sare Soosaarayaasha USB Flash Drive-ka Swivel USB usive swivel 32gb 64gb 128gb soosaarayaasha iyo alaableyda | M-Boqoradda
Tayada Sare ee Soosaarayaasha USB Flash Drive Swivel USB usive swivel 32gb 64gb 128gb
USB 2.0 Thumb Drive waa la furayaa oo la ciyaarayaa iyada oo aan wax rakibin software ah; Si fudud u geli suulka suulka qalabka si aad ugu gudbiso una kaydiso xogta u dhexeysa aaladaha. Qolka isku laabmaanta ee loo yaqaan 'Fold Storage Pen Drive' wuxuu taageeraa Windows 7/8/10 / Vista / XP / Unix / 2000 / ME / NT Linux iyo Mac OS, wuxuuna la jaan qaadayaa USB 2.0 iyo USB 1.1 port.
• USB 2.0 Thumb Drive waa la furayaa oo la ciyaarayaa iyada oo aan wax rakibin software ah; Si fudud u geli suulka suulka qalabka si aad ugu gudbiso una kaydiso xogta u dhexeysa aaladaha. Qolka isku laabmaanta ee loo yaqaan 'Fold Storage Pen Drive' wuxuu taageeraa Windows 7/8/10 / Vista / XP / Unix / 2000 / ME / NT Linux iyo Mac OS, wuxuuna la jaan qaadayaa USB 2.0 iyo USB 1.1 port.
• USB Flash Drive wuxuu ka kooban yahay ABS waara oo qallafsan iyo jirka guryaha birta oo leh naqshad wareegsan. Naqshadda wareegsan ee 360 ​​° waxaa laga sameeyay bir bir ah, qaybta gudahana waxaa laga sameeyay caag ABS ah.
• USB Flash Drive waa 58mm × 19.5mm × 10.8mm, waxayna sahlaysaa inaad siibato jeebkaaga. Dhamaadka suulka wadashadiisu waxay leedahay loop si fudud ugu xirnaan kara silsiladdaada muhiimka ah ama laydhkaaga, iyadoo la adeegsanayo in laga caawiyo inaan laga badinin, iyo qaadista fudud.
• Dhammaan kumbuyuutarrada USB-ga ayaa si adag loo tijaabiyey loona qaabeeyey ka hor inta aysan ka bixin warshadda. Waxaanan bixinnaa 12 bilood oo adeeg damaanad ah, haddii aad wax su'aalo ah qabtid fadlan noo soo dir emayl, adeegyadayada macmiilku waxay kuugu jawaabi doonaan 24 saac gudahood.
Xiga: 64MB-64GB Faux Leather USB Flash Drive
MQ-GS01 JoyCon oo loogu talagalay Beddelka Nintendo